बिश्वका खानीमा अब कति सुन बाँकी होला ? हेरौं एउटा भिडियो – सुनाखरी न्युज
बिश्वका खानीमा अब कति सुन बाँकी होला ? हेरौं एउटा भिडियो
Posted on: November 7, 2020 - 8:01 am
जस्टिन हार्पर/ बीबीसी ।
गत महिना सुनको भाउले सबै पुराना कीर्तिमान भङ्ग गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ प्रतिआउन्स ९करिब २८.३५ ग्राम० २,००० डलरभन्दा माथि पुग्यो।
हुन त यो भाउ सुन व्यापारीहरूका कारण पुगेको थियो तर प्रश्न के उठेको छ भनेः संसारका खानीमा कति सुन बाँकी छ र यो कहिले सकिन्छरु सुनको माग एउटा लगानीको रूपमा, हैसियतको प्रतीकको रूपमा तथा कैयौँ विद्युतीय उपकरणका मुख्य पार्टपुर्जाको रूपमा बढिरहेको छ।